Apple Music - ndinobva kuMac | Ini ndinobva kuMac (Peji 2)
Apple inopa avo vemauto uye veterans mwedzi mina yemahara yeApple Music muchiitiko chekuti havana kumbobvira vafadzwa nebasa iri
Jonas Brothers New Album paApple Music Ine Nyowani Spatial Audio uye Lossless Audio Zvimiro
Apple yakagadzirisa patsva Apple Music webhusaiti yevanyori vane dhizaini nyowani uye kuunza Apple Music Isina Kurasika
Spotify inosvika mamirioni makumi mana vanobhadhara
Iyo Sweden yekushambadzira mimhanzi yakasimba inoenderera ichitungamira uyu musika uye yave kuda kusvika 160 mamirioni vanyori.
Apple yatanga City Hits, iine makumi maviri neshanu playlists yenziyo dzinoteererwa zvakanyanya munyika dzinopfuura zana.
Iyo mimhanzi vhidhiyo sevhisi Apple Music TV yakawedzera kuwanikwa kwayo kune nyika mbiri nyowani: United Kingdom neCanada.
Apple inodyara $ 50 mamirioni muvanozvimiririra vaimbi chikuva UnitedMasters
Apple yaita mari yemamirioni makumi mashanu emadhora, pamwechete neAlfabheti, muplatform yeUnitedMasters
Zuva rekupedzisira kutora mukana wemwedzi mitatu yemahara yeAmazon Music HD
Zuva rekupedzisira kutora mukana weiyo 3-mwedzi yemahara kusimudzira iyo iyo Amazon inotipa isu kune yayo yepamusoro-kutendeka kutenderera mimhanzi sevhisi.
Leslie Jordan, mutambi ane mukurumbira uye mudikanwi wekutambira Nyika redhiyo show "Hunker Down Radio" paApple Music
Nakidzwa neAmazon Music HD yemahara kwemwedzi mitatu
Kusvikira inotevera Kurume 1, unogona kubata Apple Music HD uye unakirwe nebasa iri kwemwedzi mitatu zvachose mahara.
Apple inobhadhara $ 163 mamirioni mumitero kune maartist
Apple inobhadhara $ 163 mamirioni pamitero kune maartist uye vanyori venziyo vane zvemukati paApple Music
Replay 2021 yave kuwanikwa paApple Music
Rondedzero yeReplay 2021 yave kuwanikwa paApple Music uye ichavandudzwa svondo rega-rega kugutsikana kwevashandisi vayo.
Apple Music inowedzera chikamu chitsva: Fitness +
Chikamu chitsva chakawedzerwa kuApple Music inonzi Fitness iyo inozoshandiswa kutsvaga mazita akakodzera eApple Fitness +
Tesla kutsigira Apple Music munguva pfupi
Makuhwa anoratidza kuti Tesla ichatsigira Apple Music nekudaro ichiwedzera mikana yevanoshandisa mota
Mwedzi mina yemahara Apple Music ine TikTok
Kana iwe uchida TikTok uye nziyo dzaunoteerera ipapo, unogona kusvika pamwedzi mina yemahara Apple Music neTikTok.
Apple Music yatove inoenderana zvizere nenhamba yakanaka yevatauri vanoshanda nemubatsiri weGoogle.
Rondedzero yezvakanakisa zve2020 zvakaburitswa paApple Music
Iwo mazita ezvakanakisa e2020 paApple Music aburitswa. Kune runyorwa rwepasirese, tsamba dzinonyanya kuverengerwa, dzakanyanya kutsvaga muShazam, uye nenyika.
Ava ndivo vakakunda maApple Music Awards
Apple yakazivisa vakundi vezvikamu zvishanu zviri chikamu cheApple Music Awards 2020
Vashandisi vemamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu vanofarira Spotify zuva nezuva
Munguva yekota yekupedzisira, Spotify yakwanisa kuwedzera mamirioni matanhatu vatsva vakabhadharwa kune yavo yekushambadzira mimhanzi sevhisi
Apple Music uye Apple Podcast vawana mudiwa akakwana muPorsche Taycan nyowani, magetsi ekutanga echiratidzo ichi.
Apple Music TV, maawa makumi maviri nemana emavhidhiyo emimhanzi asingamire
Apple yatanga chirongwa chitsva cheApple Music TV icho chine kutepfenyura mavhidhiyo emimhanzi maawa makumi maviri nemasere pasina kukanganiswa.
Tim Cook akatumira yake yekutamba yezuva ranhasi Apple chiitiko pa Twitter. Teerera zvakafanana naiye kuti uwane nguva
Spotify haidi kuti zvinyorwa zvake zvekutora zviendeswe kune mamwe masevhisi ekushambadzira masevhisi
Spotify yakazopedzisira yasarudza kurega kubvumira zvinyorwa zvayo kuti zvitumidzirwe kune mamwe mapuratifomu kuburikidza neayo SDK.
Spotify ndiye asingazivikanwe mambo wekushambadza mimhanzi nevanopfuura mamirioni mazana matatu evashandisi, pakati pevanyori uye ...
Vashandisi vanoedza Apple Music vanonyorera zvakapfuura kupfuura avo vanoedza Spotify
Vakomana vanobva kuCupertino vakaburitsa chiziviso chitsva cheApple Music uko huwandu hwenyika dzirinowanikwa hunoratidzwa.
MuApple vanoshandura zita racho kunhepfenyuro yeBeats 1 kunzi Apple Music 1, vanowedzerawo zviteshi zviviri zvitsva
Zvakare mwedzi mitanhatu yemahara Apple Music yevadzidzi
Apple inotanga kusimudzira kwemwedzi mitanhatu-yekusununguka kwemimhanzi sevhisi, Apple Music
Iyo beta vhezheni yeApple Music webhusaiti yave kuwanikwa
Iyo itsva beta vhezheni yeApple Music webhusaiti yave kuwanikwa kune vese vashandisi vanoda kuona iyo dhizaini nhau
Chishanu chega chega muna Nyamavhuvhu, Lady Gaga achange aine yake redhiyo showa paApple Music kwaachataura nezve kugadzirwa kweyekupedzisira dambarefu Chromatica
Ndichiri muApple zvinoita sekunge ivo havadi kuzivisa manhamba nezve huwandu hwevanyori vebasa ravo ...
Kuona kunyoreswa kunoshanda ndakaenda kuburikidza neApple Music uye ndikaona yemahara mwedzi saka izvozvi ndine mwedzi wakasununguka webasa
Spotify inosvika 130 mamirioni ekushandisa vashandisi
Nhamba dzekupedzisira dzepamutemo kubva kuSpotify dzinotiratidza kuti sevhisi iyi inoramba ichikura sei nekukasira uye nemiganhu, ichisvika mamirioni zana ekubhadhara vanobhadharisa
Apple Music webhu webhu inotanga zviri pamutemo
Iyo Apple Music webhu app yatangwa zviri pamutemo. Iye zvino unogona kunakidzwa neyako mimhanzi kubva kune chero dandemutande bhurawuza, pasina kuda iyo yakatsaurirwa app.
Apple Music yakamhan'arira kukwikwidza kusiri iko
Apple inomhan'arirwa, kunyanya Apple Music, pamwe chete nemamwe makambani emimhanzi mukutenderera, kumakwikwi asina kunaka
macOS Catalina 10.15.4 beta 2 inowedzera karaoke kuApple Music
MacOS Catalina 10.15.4 beta 2 inosanganisira karaoke muApple Music. Sezvo nePhones, Apple Music ichaenderana mazwi kumumhanzi paMacs.
Apple inoenderera mberi ichishanda kuyedza kusvika kune vamwe vashandisi uye yakahaya aimbove Warner Music Group Executive kusimudzira zvirongwa zvepasirese.
Kushambadzira kweAmazon mimhanzi sevhisi parizvino ine mamirioni makumi mashanu nemashanu evashandisi pamwedzi, padyo nemamirioni makumi matanhatu vanyoreri veApple Music
Kwekupedzisira Kurume, Apple yakaunza masevhisi matatu matsva: Apple Arcade, Apple TV + uye Apple News +. Aya masevhisi matatu, ayo atove ...
Spotify inodarika zvese zvinotarisirwa uye inosvika mamirioni e113 vanobhadhara vanyoreri
Huwandu hwevabhadharwi vakabhadharwa kuti Spotify hune yaGunyana 30 inosvika 113 mamirioni.
Apple Music uye Apple TV + mupaki imwe? Dzimwe runyerekupe dzinoratidza kuti hongu
Iko mukana wekuti Apple inopa zvese Apple Music uye Apple TV + mupakeji zvinowanda uye zvinogona kukurudzira kune ese masevhisi.
Apple Music inotangisa webhu vhezheni muchikamu chebeta
Taylor Swift Kutora chikamu muApple Stores Music Lab Sessions
Taylow Swift achange ari chikamu cheMusic Lab maratidziro ayo Apple anobata muApple Chitoro, kunyangwe nguva ino iri muUnited States chete.
Iyo ruzivo rwebasa Apple Music yeArtist yakasiya beta uye chero mushandisi ane zvemukati papuratifomu zvino anogona kuwana
Jay-Z's Blueprint trilogy yakazopedzisira yadonha kubva kuTidal chete uye parizvino iri paApple Music, Spotify uye mamwe masevhisi ekushambadzira masevhisi.
Chiziviso chitsva chaApple chinotiratidza mashandisiro anoita maMac Mac kunyora
Vakomana vanobva kuCupertino vakaburitsa shambadziro nyowani uko kwavanotiratidza mashandisiro anoita vaimbi vazhinji Mac kugadzira mimhanzi yavo.
Vashandisi muNew Zealand neAustralia vanogona kugadzira yavo Amazon Echo, Sonos uye Fire TV kuti vanakirwe neApple Music zvakananga.
Lindsay Rothschild, Aimbove YouTube neDisney Executive, Anobatana neApple Music Team
Lindsay Rothschild, aimbova mukuru weYouTube neDisney, mubhadharo mutsva weApple wekuvandudza hukama paApple Music.
European Union kuti iongorore kunyunyuta kwaSpotify pamusoro peApple
Sezvinotarisirwa, European Union ichavhura kuferefetwa kunyunyuta kwaSpotify kwekufungidzirwa kuve oga pachikuva chayo.
Apple Music inowira kunzvimbo yechishanu mukudzidza kwazvino kweBrand Kuvanzika, kwakapfuurwa neSpotify
Appla Music yakadonhedza nzvimbo shanu muongororo yeBrand Intimidation yakaitwa muUnited States, Mexico neUnited Emirates.
Spotify inosvika 100 mamirioni vanyori pasi rese
Iwo mamirioni zana ekunyorera chimiro cheiyo yekutamba mimhanzi sevhisi ichangopfuura iyo Spotify.
Amazon iri kuronga kuvhura chirongwa chitsva chePrim Music chine mhando yepamusoro odhiyo, ichikwikwidza neApple Music kana Spotify. Tsvaga!
Sezvo isu takazivisa mazuva mashoma apfuura, yeAmazon yemahara yekumhanyisa mimhanzi sevhisi yave kuwanikwa, kunyangwe chete muUnited States.
Beyoncé anozopedzisira aburitsa dambarefu rake "Lemonade" paApple Music uye mamwe mapuratifomu emimhanzi mushure memakore matatu akasarudzika paTidal.
Amazon inogona kuburitsa inozivisa mimhanzi sevhisi nezviziviso svondo rinouya
E-commerce hofori inogona kuvhura-inotsigirwa yemahara yemumhanzi kufambisa sevhisi yakafanana neSpotify
Apple inoderedza Apple Music mutengo muIndia kutora Spotify uye YouTube Premium
Apple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi yakadzora mutengo wezvirongwa zvakasiyana nekuuya kweSpotify neYouTube Premium.
Apple's yekushambadzira sevhisi sevhisi yatanga kuwanikwa paAmazon Echos muUnited Kingdom neIreland.
Iyo nyowani Apple Music playlist inonzi «Suave»
Runyorwa rwutsva rwakagadzirwa neApple uye nezvakarongedzwa zvemukati zvinodaidzwa kuti Suave, runyorwa rwekugadzira nenziyo muSpanish, Portuguese neChirungu.
Spotify yapindurazve chichemo cheApple kuEuropean Commission, ichiti izvo zvavari kuyedza kuita ndezvoga.
Apple inopindura kunyunyuta kweSpotify zviri pamutemo muEuropean Union
Apple inopindura Spotify ichiti inoda kufarira mabhenefiti anopiwa neApp Store pasina rutsigiro rwemari.
Spotify afunga kushora pachena uye kutumira kunyunyuta zviri pamutemo kuEuropean Commission nekuda kwematambudziko avanayo neApple neApp Store.
Apple inogadzirisa mabutiro emamwe mazita ekuverenga emabasa ekutanga evatambi vanozivikanwa paApple Music
Apple yakafunga kuvandudza zvizere mabutiro ayo ayo ekuridza mazita muApple Music, uye ikozvino akagadzirwa nevanyanzvi vayo.
Iwo makuru masevhisi ekushambadzira masevhisi muUnited States, kunze kweApple Music, vauya pamwechete kuramba mari yakawedzerwa kune vanyori
Apple inoenderera ichitumira zviziviso nezve Apple Music, ikozvino ichikubvumidza iwe kuti ugovane mwedzi wekuyedza neshamwari
Apple yakaenderera mberi kutumira zviziviso kune vashandisi veApple Music, panguva ino zvichiratidza kuti zvekugovana ivo vanowana mwedzi wakasununguka.
Ariana Grande maalbum maviri ekupedzisira izvozvi ave paApple Music
Iwo maviri ekupedzisira maalbhamu eAriana Grande atove paApple Music. Yaivewo yakanyanya kurodha pasi dhizaini nemukadzi wechikadzi mumaawa makumi maviri nemana ekutanga.
Apple yakatumira zviziviso kune vamwe vashandisi vayo kuitira kuti vatore kunyorera kuApple Music, kunyangwe iri nzira inoshusha.
Spotify padanho rekusvika zana mamirioni vanyori
Spotify achangobva kuzivisa huwandu hwevashandisi vanobhadhara izvozvi vachishandisa chikuva chayo: mamirioni 96.
Apple yekushambadzira mimhanzi sevhisi yasvika makumi mashanu emamiriyoni ekubhadhara vanyori.
Iwo mazwi ari mukati meApple Music nziyo uye kugona kuzvitsvaga zvasvika pamutemo kune dzimwe nyika senge Spain neMexico.
Mwedzi wapera, kubva kuApple vakaburitsa tweet pane yavo Apple Music account, yavaishandisa iyo Android mutengi. Tsvaga pano!
Vhidhiyo nyowani yaPaul McCartney chikumbiro kuvana vanogara vachishungurudzwa nevezera ravo.
Iwe unogona ikozvino kushandisa Apple Music ine Alexa neAmazon Echo smart speaker
Iyo yekumhanyisa mimhanzi sevhisi Apple Music ikozvino yakatsigirwa zviri pamutemo ne Alexa uye Amazon Echo vatauri mumatunhu akasarudzwa, tsvaga!
Kuziviswa kwevasarudzo veGrammy ve2019 kunogona kuteverwa kuburikidza neApple Music uye CBS Chishanu chinotevera, Zvita 7.
Maitiro embed yeApple Music widget pane chero webhusaiti
Tsvaga pano maitiro aungaita nyore kubatanidza Apple Music playlist kana album widget mune chero webhusaiti kuburikidza neHTML iFrame.
Apple Music inosvika makumi mashanu emamiriyoni evashandisi, kunyangwe Spotify ichiri kumberi uye ichikura padanho riri nani
Apple Music yasvika zviri pamutemo makumi mashanu emamiriyoni ekubhadhara vanhu, kunyangwe Spotify ichiri kutungamira uye ichikura nekukurumidza.
Iyo yekumhanyisa mimhanzi sevhisi Apple Music ichasvika kubva Zvita 17 kuenda kuAmazon Echo uye maspika ane Alexa, tsvaga!
Huwandu hwevashandisi veSpotify nhasi huri 87 mamirioni akabhadharwa nepo huwandu hwevashandisi vemahara iri mamirioni 191.
Cupertino Boys yakavhura studio nyowani yeApple Music's Beats1 chiteshi muNew York City.
Apple inoramba kuti yakatenga kambani yeAsaii, yakangotsvaga vavaki vayo
Muvhuro wapfuura isu takamuka kune nhau dzechangobva kutora neApple, kutenga kwakatendera ...
Apple Music ikozvino inoshanda paAuto Auto
Iyo HomePod ichave ichiwanikwa muSpain kubva Gumiguru 26
Apple's HomePod inozosvika muSpain Gumiguru 26
Iyo Cupertino-based kambani yakachinja zvakanyanya nzira iyo ese maartist basa anowanikwa paApple Music inoratidzwa.
Emmy wekutanga uyo Apple akakunda, yekugadzira zvemukati zvemukati, abva paruoko rweCarpool Karaoke, chirongwa chakatepfenyurwa chete kuburikidza neApple Music
European Union inozobvumidza kutengwa kwaShazam naApple
Pakutanga gore rino, mwedzi miviri mushure mekutengwa kweApple Shazam, European Union yakazivisa kuti iri kuongorora iyo Mushure memwedzi yakati wandei yekuferefeta, European Union yakapa mukana wekuti Apple inogona kutora Shazam.
Keynote munaGunyana 12 iri kupa zvakawanda zvekutaura nezvazvo uye kubvira Apple yakatumira iyo ...
Nyamavhuvhu anotarisirwa kutamiswa uye, zvakare, Keynote weavo vanobva Cupertino ari kusimudza zvakawanda zvinotarisirwa…
Ngozi yeApple Music, Spotify icharega kushambadzira kusvetuke mune yayo yemahara vhezheni
Zviripachena kuti kushambadzira ndiko kunofambisa emahara masevhisi pane network yemasaiti, asi imwe ...
Apple Music kuburitsa yakasarudzika zvinyorwa nezve muimbi Kesha
Chaizvoizvo kubvira payakasvika pamusika muna2015, vakomana vanobva kuCupertino vanga vachida kushandura Apple Music kuita chimwe chinhu kupfuura papuratifomu yakapusa.Iyo inotevera yezvinhu iyo inosvika iri fomu rezvinyorwa pane Apple inowirirana mumhanzi chikuva inotiratidza maitiro ekugadzira Damba idzva raKesha
Hatigoni kutaura kuti Apple Music ndiyo yakanyanya kushandiswa mumhanzi kutenderera sevhisi nhasi, asi zvishoma ...
Spotify inosvika pamamirioni makumi masere nematatu vanyoreri uye vatove nevashandisi mamirioni zana nemakumi masere
Mumushumo wayo wemari yekota yechipiri ya2018 yakagovaniswa zuro, yechipiri kubva pakapihwa ruzhinji rwekupa, Spotify yakazivisa Spotify yakazivisa manhamba ekuti vaive nayo pakupera kwaJune, pamwe nemamirioni makumi matatu nemasere evashandisi vanobhadhara papuratifomu.
Ed Sheeran's zvinyorwa zvinyorwa paApple Music muna Nyamavhuvhu 28
Mumakore maviri apfuura, takaona kuti muimbi Ed Sheeran ave sei chimwe chezvakazaruro munyika yemimhanzi isingabatanidzwe Isu tatova nezuva rekuratidzwa kwenyaya pamusoro pehupenyu hwaEd Sheeran, chinyorwa icho tinoratidza kutanga kwemuimbi mumhanzi kusvika nhasi
Imwe yekutanga yeApple vhidhiyo kubhejera zvine chekuita nemimhanzi yaive Carpool Karaoke, iyo show yakapihwa na ...
Apple Music inodarika huwandu hwevanyori kune Spotify muUnited States
Kunyangwe nebvudzi, Apple Music inodarika Spotify muhuwandu hwevanyori muUnited States, sekureva kweanotungamira indasitiri sosi.
Dambarefu idzva raDrake rakatyora rekodhi rapfuura raichengetwa nebhuku rake razvino, More Life, kuti rionekwe mumaawa makumi maviri nemana ekutanga.
Iyo yazvino dambarefu Beyoncé naJay-Z vakaburitsa yave kuwanikwa paApple Music mazuva maviri mushure mekusarudzika paTidal kupera.
"Munguva pfupi" chichava chikamu chitsva cheApple Music
Imwe yemanyorerwo anotevera achauya kubva muruoko rweApple Music, tinoiwana mune inotevera inovhurwa iyo Apple ichatanga pane yayo inomhanyisa mimhanzi chikuva
Dambarefu idzva reKan West richafambiswa kubva pakutanga paApple Music nemamwe mapuratifomu emimhanzi.
Iyo Primavera Inzwi 2018 playlist yave kuwanikwa paApple Music
Apple Music inoita kuti tiwanikwe kuburikidza neApple Music, iro runyorwa rwe nziyo dzinozove chikamu chePrimavera Sound 2018, inoitirwa muBarcelona kubva muna Chivabvu 30 kusvika Chikumi 3.
Apple Music inofanira kugadzirira kukwikwidza neYouTube Music
Kana paine chinhu chimwe chiri pachena, ndechekuti Google iri kukura nekusvetuka uye nemiyero uye ikozvino yave kuda kugadzira nzira yayo ...
Isu tanga tichitaura kwenguva yakati nezve vashandisi iyo Apple Music ine uye nekuuya kwemakumi mashanu nhamba ...
Apple inobhadhara anodarika miriyoni yemadhora kune zvinyorwa pahupenyu hwaEd Sheeran
Pakupera kwegore rapfuura, mumwe wangu Jordi akakuzivisa nezve nziyo dzakanyanya kutererwa kuburikidza neshumiro ...
Kunyange chiri chokwadi kuti uku kuzara kwekufungidzira, hatigone kuramba kuti kukura kwaApple ...
Apple Music inorasikirwa nemusoro weR & B uye Hip-Hop, inoenda kuSpotify
Iye murume ane basa rekumhanyisa roster yekugadzira uye zvese zveHip-Hip uye R&B zvine chekuita nazvo achangobva kuzivisa kubva kwake kuApple Music kuenda kuSpotify nekuzadza chinzvimbo chimwe chete.
Apple inoramba kuti mu2019 ichabvisa kutengeswa kwemimhanzi paTunes
Apple inoramba zvakasimba runyerekupe runoramba ruchikura ruchiti rwuchapedza kutengesa kwe ...
Mwedzi mumwe weApple Music mahara kana iwe ukaisa Musixmatch
Kana usati wamboshandisa Apple mimhanzi yekushambadzira sevhisi uye iine mwedzi mitatu yemahara izvozvi ...
Kunyangwe haazopedzisira asiya kambani sekunyeperwa kutanga kwegore rino, Jimmy Iovine haachazove nemabasa mukati meApple Music.
Zvinoenderana neazvino data repamutemo kubva kuApple, Apple inomhanyisa mumhanzi sevhisi ine mamirioni makumi matatu nemasere vanyoreri, nepo mamwe mamirioni masere ari kuyedza munguva yemahara
Apple ichapa mwedzi mitanhatu yemahara yeApple Music pane mamwe maFiat neVolkswagen modhi
Kana iwe uri kufunga nezve kutenga mota nyowani. Uye iyi ichave FIAT kana Volkswagen, iwe uchashamisika nekuti ivo vanokupa iwe 6 mwedzi yeApple Music sevhisi
Iine vanopfuura mamirioni makumi matatu nematanhatu vanyoreri, sekureva kwemuongorori Toni Sacconaghi, Apple Music parizvino yakakosha madhora gumi emadhora.
Apple inoenderera mberi nekuwedzera zvipo zvayo mune dzimwe nyika dzayo mune huvepo kuburikidza nezvigadzirwa uye ...
Iyo HomePod haizoverengera kune mushandisi muganho paApple Music uye iTunes Chishandiso
Iyo HomePod haizoverengera kune yakanyanya kuwanda zvishandiso kwatinogona kuteerera kuApple Music. Zvakare, mimhanzi inoyerera kuIye HomePod haizobviswa pakuteerera mimhanzi paMac.
Sekureva kweThe Wall Street Journal, Apple Music inogona kudarika huwandu hwevanyoreri kuSpotify muUnited States zhizha rino, maererano nechero kukura kuri kuita kwevaviri muUnited States.
Izvo hazvizove zvakafanira kubvumirana Apple Music kunakirwa nePodPod, zvinotibvumidza isu kuridza nziyo kubva kuTunes, podcasts uye Beats station.
Kana iwe uri kufunga nezve kutenga HomePod, asi usade kuchinja kubva kuSpotify kuenda kuApple Music, hauzove nedambudziko, nekuti HomePod haidi Apple Music kutamba mimhanzi yedu yatinofarira.
Boka Def Leppard richangobva kuzivisa kuti katarogu yayo yese yave kuwanikwa zvese paApple Music, zvakare paSpotify nemamwe masevhisi ekushambadzira masevhisi.
Jimmy Iovine anobuda kuti arambe runyerekupe rwakamuisa kunze kweApple
Mashoko aJimmy Iovine haagoni kuve akakosha uye akajeka: ini handisi kuzosiya Apple. Nenyaya idzi ini ...
Kubva panguva yekuve chikamu, pazvakaratidzika kuti izvo zvekusarudzika zvakapera zvachose mushure mekupedzisira ...
Iwe unoverenga izvo chaizvo, kana chero nguva iwe uchinyorerwa kune Apple mimhanzi yekushambadzira sevhisi, Apple Music ...
Sezvo gore rega rega Apple inotiratidza kubudirira kukuru mukushandisa kwayo, maBooks, maPodcast, mimhanzi nevamwe, uye gore rino ...
Dambarefu raTaylor Swift raanozivikanwa rave kuwanikwa paApple Music uye Spotify, vhiki nhatu dzaburitswa.
Taylor Swift nealbum yake 'Mbiri' haizovepo paApple Music
Zvakare gakava rinosvetuka nemuimbi Taylor Swift uye Apple Music, asi ino nguva Spotify inobatanidzwawo ...
Kuratidzwa kweCarpool Karaoke kwakanonoka nekuda kwemutauro unonyadzisa unoratidzwa mune zvimwe zvakambo nyorwa.
Eddy Cue anoenda kuIndia kunopa Mac Mac nyowani: kudzidziswa kweKM Music Conservatory neiyo Logic Pro X chirongwa.
Apple yakasaina chibvumirano neAmblin Television kuti igadzire mwaka mutsva weanozivikanwa 80's akateedzana Anoshamisa Ngano
Iyo inotevera zvinyorwa zvichaburitswa neApple Music zvine chekuita nemugadziri Bert Berns, anobudirira mugadziri muma60s
Apple Music yatove nevanyoreri mamirioni gumi nemanomwe
Apple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi ichangobva kuzivisa kuti huwandu hwevanyoreri hwainayo ndeye mamirioni makumi matatu
Nyowani Apple vhidhiyo inoratidza mashandiro eApple Watch akateedzana 3 neLTE, uchishandisa iyo Apple Music application
Apple uye Warner Music vanosvika chibvumirano chinobatsira chose kune vese
Mune kumwe kwekuyedza kwakawanda kwekutungamira musika wevateereri, Apple Music yakawana kubatana kwepedyo ...
Kubva Cupertino nerudo: Apple inoda kuwana kodzero kune iyo James Bond franchise
Runyerekupe rwazvino runonongedzera kungangoita kufarira kwaApple mukuwana kodzero yeiyo James Bond franchise kubva kuApple
Iyo Carpool karaoke yekugadzira kambani yakasiya sarudzo yekutepfenyura chirongwa icho icho boka rakanyora naJames Corden mumaoko emhuri
Anoshanda weAmerican Verizon asvika pachibvumirano neApple kuti ape mwedzi yemahara kunyorera kuApple Music
Turera nyowani yeCarpool Karaoke, isati yatanga kuratidzwa muna Nyamavhuvhu 8
New Apple tirera sekusimudzira kuCarpool Karaoke: chirongwa chakateedzana, icho chichatanga nevakakurumbira vakasiyana muna Nyamavhuvhu 8.
Nyowani Patriotic Apple Mumhanzi Ad naBrantley Gilbert
Nyowani yekushambadzira kushambadzira yeApple's flagship yekushambadzira sevhisi. Ino nguva, iyo yeCalifornia mhando iri kutsvaga Apple Music ku ...
Linkin Park muimbi akanyorerwa Carpool Karaoke mazuva asati azviuraya
Vhiki rapfuura, kufa kunosiririsa kwemuimbi anozivikanwa wemuAmerican uye munyori wenziyo Chester Bennington, mutungamiri muimbi weLinkin Park, akaita nhau ...
Nyika nhatu nyowani dzakawedzerwa kune pfupi pfupi nyika dzinoenderana nekutenga kweTunes kuburikidza nefoni bhiri.
Jay-Z album 4:44 yave kuwanikwa paApple Music
Vhiki mushure mekuburitswa, dambarefu raJay-Z rave kuwanikwa paApple Music, Spotify, Amazon Prime Music uye mamwe masevhisi ekushambadzira.
Apple Music vanobatana neFender ye rock playlists
Apple haimire kuvandudza zvirimo pane akasiyana mapuratifomu aakagadzirira ekupedzisira-mushandisi kunwa….
Vhiki chete mushure mekutanga kwayo yakasarudzika paTidal, 4:44, dambarefu raJay-Z, inogona kunge yave kuda kurova Apple Music
Nharo Kanye West inopedzisira yasiya Tidal
Kanye West achangobva kuzivisa kuti ari kupedzisira asiya mumhanzi wekutenderera Tidal, nekuda kwekusawirirana naJay Z
Vakomana vanobva kuCupertino vatangisa chirongwa chitsva chemunhu mumwe chekunyorera kuApple Music for 99 euros, kuchengetedza maeuro makumi maviri pakupera kwegore.
Iko kufambisa kwazvino uko Apple kwaita kusimudzira vhidhiyo yayo kupatsanura kwave kuri kusaina maviri Sony mhenyu anoratidza
Kubva Chishanu chapfuura, zvese zvaTaylor Swift's discographies zvaramba kuve zveApple Music, saka yave kuwanikwa paSpotify, Tidal ...
Apple inogadzirira kumhepo "Planet yeApplication" manheru ano
Kutora mukana weWWDC kudhonza kuri kuitika muSan José vhiki ino, Apple iri kugadzirira ku ...
Apple Park, Apple Music mutengo, MateBook X, iTunes 12.6.1.27, yakatetepa MacBook Pro uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Isu takapedza svondo idzva muSoy de Mac neyekuunganidzwa kwekare, mubatanidzwa uyo svondo rino unouya wakazara nevakawanda ...
Apple Music haisisina yemahara kwemwedzi mitatu yekutanga kuita € 3
Zvinotaridza kuti Apple inomira kupa yayo yekushambadzira mimhanzi sevhisi yemahara mukati memwedzi mitatu yekutanga ye ...
Munguva yezuro, Jimmy Iovine, director director weApple Music service, akasangana neMusic Business Worldwide ku…
Shakira achaparadzira zvikamu zvitatu zvepurogiramu yemimhanzi paBeats 1
Apple yakazviita zvakare uye muimbi Shakira ndiye achave wekutanga kutora chikamu ...
Mavhiki mashoma apfuura takakuudza kuti Apple yaigadzirisa sei Apple Store paFifth Avenue muNew York ku ...
Apple Music yaigona chete kutepfenyura zvinyorwa zvePrince's 1983 konzati
Apple inenge ichitaurirana nezvemifananidzo yakasarudzika yechiratidzo chePrince konzati kuti igadzire yakasarudzika zvinyorwa paApple Music
Kumusoro Inotevera, ndicho chikamu chitsva cheApple Music kuunza vasingazivikanwe maartist
Chikamu chitsva cheApple Music chinonzi Up Up Inotevera, uye ichatibvumidza kusangana nevatsva vemifananidzo mwedzi wega wega.
Rapper Jay Z akadhonza katarogu yake yese kubva kumimhanzi yekufambisa seSpotify neApple Music
Drake akazviita zvakare. Mambo wekushambadzira mimhanzi akazviita zvakare. Iye rapper, munyori ...
Vashandisi muAustria, Italy neSingapore vava kukwanisa kutenga invoice kubva kuzvitoro zveApple neApple Music
Nyika nhatu nyowani dzinototendera vashandisi vadzo kubhadhara kutenga kwemaapps, mitambo, mabhuku uye Apple Music nemari yavo yefoni.
Apple Music inodarika vanyoreri mamirioni makumi maviri, asi kambani haina kufara
Eddy Cue anozivisa kuti Apple Music yakatopfuura kupfuura mamirioni makumi maviri evanyoreri, zvisinei, kambani haina kugutsikana
Apple Inoburitsa Yekutanga Ad yeJames Corden's Carpool Karaoke Spin-Off
Apple Music ichangobva kufumura zviri pamutemo chichava chiratidziro chitsva chaJames Corden, kubviswa kweLate Late Show
Apple Music seCultural Landmark Maererano naJimmy Iovine
Pfupiso yehurukuro yaJimmy Iovine nemagazini yeVariety. Taura nezve Apple Music zvisaririra zvibvumirano uye ramangwana zvirongwa
Apple inoshandira aimbove mukuru werekhodhi hukama hweSpotify
Iyo Cupertino-based kambani yakashandira Spotify aimbove mukuru wezvekudyidzana hukama kuchikwata chake.
Maitiro ekuwedzera imwe nzvimbo pane yako Mac nekubvisa iyo Apple Music cache
Kudurura Apple Music cache inzira yakanaka yekuwana imwe nzvimbo pane yako Mac's hard drive.
Bayer Munich kupa zvakasarudzika playlists paApple Music
Apple yasvika pachibvumirano neBayer Munich kuti vape mimhanzi uye zvemukati zvakasarudzika kuburikidza neApple Music
Apple yakasimbisa kufarira kwayo pop tsika kuburikidza naJimmy Iovine
Izvo zvaive pachena kuti pamwe nehuwandu hwemakomendi ayo atanga kutenderera panetiweki isu tinotaurirana nezvinobvira ...
Bozoma Saint John, wekushambadza mukuru weApple Music, akabvunzurudzwa muKusimba Kwakawanda Kwevakadzi Kuberekwa kwe ...
Kunyoreswa kwevadzidzi kuApple Music kwave kuwanikwa kuSpain nehafu yemutengo wavo wenguva dzose, kungori ma4,99 Euro pamwedzi
Imwezve Svondo tinodzoka kuzokuperekedza neyekuunganidzwa kwetsika uko kwatino simbisa zvinyorwa zvine ...
"Zvinokanganisa Kunaka": Nyowani Apple Music Ads inotamba naTaylor Swift naDrake
Sezvo zviri zvakajairwa maitiro, isu tine akawanda uye akawanda Apple Music kushambadzira. Munguva pfupi yapfuura, Apple yakatumirwa pa ...
Kune avo vasingazive nhasi, Apple ine yakatarwa webhusaiti kwainoburitsa ...
Beta nyowani ye macOS 10.12.2, Apple Campus 2, MacBook Pro 2016 uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Imwezve vhiki takasvika kuSoy de Mac tiine muunganidzwa wekuti svondo rino rakazara nenhau ...
Apple Music inogona kudonha mumutengo
Sezvo iwe wave kugona kuverenga mumusoro wenyaya ino, Apple inogona kunge iri kufunga nezve mukana wekuti ...
Apple yatove yakaisa vatauri veSonos vatsva kutengeswa munyika dzinoverengeka, kusanganisira Spain, ine kunyoreswa kwemwedzi mitatu Apple Music
Spotify haina hurongwa hwekutanga chirongwa cheApple TV
Iyo yekuSweden mimhanzi yekushambadzira kambani haina hurongwa hwekutanga chirongwa chechina-chizvarwa Apple TV.
Pazuva apo avo vane mutoro weApple Music vakataura zvirevo zvavakafanotaura ...
Jimmy Iovine anotaura nezve zvakapfuura uye ramangwana reApple Music
Mumwe wema CEO weApple Music, Jimmy Iovine, akapa pfungwa yake nezvekuti ...
Apple Music makadhi echipo ave kuwanikwa kuSpain
Iwo makadhi echipo akatangwa naApple kutanga kwaGunyana muUnited States ave kuwanikwa kuSpain.
Iyo Sonos siginecha vatauri ichave ichiwanikwa kuburikidza neApple Chitoro kutanga Gumiguru 5, Apple's umpteenth kuyedza kusimudzira Apple Music.
Drake Anosunungura "Ndapota Ndiregererei," Anosarudzika Pfupi PaApple Music
Artist Drake anongoburitsa firimu pfupi paApple Music sekushoropodzwa kuchikura kuchipesana neiri zano rakaitwa nekambani
Wakamboedza yemahara 3 mwedzi yeApple Music? Nakidzwa nemumhanzi wako wese wakadzvanywa kana online pamidziyo yako yese. Edza izvozvi, zvakakosha.
Yekupedzisira Apple Music kushambadza inoratidza James Corden, achipa Eddy Cue, Jimmy Ionice naSaint John mazano kune anotevera Apple Music kushambadza.
Spotify inosvika mamirioni makumi mana vanyoreri
Nhamba dzekupedzisira dzakaburitswa naSpotify dzinotiratidza mashandiro anoita kambani yemimhanzi yeSweden kusvika 40 mamirioni
Iyo iPhones nyowani, AirPods, iyo nyowani Apple Watch Series 2, Apple Music Zvipo Makadhi uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac
Svondo yekutanga yauya mushure mekunge Apple yaunza zvigadzirwa zvayo zvitsva muKeynote Chitatu chapfuura….
Iyo yazvino data pane huwandu hwevanyori veApple Music inotiratidza kuti iyo Cupertino-based kambani ine 17 mamirioni vanyori
Iyo Apple Music app yeApple yakaburitswa kanopfuura mamirioni gumi nguva
Iyo Apple Music app yeApple yakangorova gumi miriyoni kurodha pasi, mwedzi mipfumbamwe mushure mekumhara pane Android
Apple inoenderera ichimanikidza iyo yekumhanyisa kuti ipe rumwe ruzivo uye masevhisi ari nani kuburikidza nekushambadzira kwayo mimhanzi seApple Music
Kuti uwedzere huwandu hwevanyori veMusic Music, Apple yatanga makadhi echipo makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe emadhora anotibvumidza kusevha mwedzi miviri yekushandira
Vhiki rimwe chete mushure mekuburitswa kwenyaya yaFrank Ocean yazvino chete yeApple Music, iyo dambarefu nyowani yakadzokororwa kanopfuura mazana mazana manomwe nemakumi mashanu.
Dambarefu rinotevera raMusikana Lady Gaga harizowanikwe chete kune chero mimhanzi inoyerera, kusanganisira Apple Music
Sekureva kwaBloomberg, iyo femu yeSweden iri kushandisa sisitimu inokuvadza maartist avo vanongoburitsa maalbums avo Apple Music kana Beats 1
Universal Music haizosvika pachibvumirano chega chega nechero chikuva chekutepfenyura
KuUniversal Music haina kugara zvakanaka kuti Frank Ocean akazvimiririra akazvimiririra dambarefu rake razvino uye haazobvumidze zvibvumirano zvega zvega
Spotify inoda kudzikisa muzana yairi kubhadhara izvozvi kutora makambani ekurekodha, asi ivo vanoda kuti vaenzane neApple Music
Apple ichangobva kuzivisa misi mitsva yeApple Music Festival 2016, ichaitwa kubva munaGunyana 18 kusvika 30 wegore rino.
Chekupedzisira, uye mushure mekunonoka kwenguva refu, dambarefu raFrank Ocean rekupedzisira rasvika Apple Music chete
Apple iri kuhaya vashandi kuti vaise rwiyo rwemazwi kuApple Music
Vakomana vanobva kuCupertino vari kutsvaga vanhu vanoverengeka kuti vatarise kuunzwa kwemazwi enziyo muApple Music, mukuwedzera kududziro yavo.
Apple ichangobva kuzivisa paayo Twitter account kuuya kweApple Music muSouth Korea, mazuva mashoma yasvika muIsrael.
Apple Music Inowanikwa muIsrael
Apple Music debuts muIsrael. Zvinotaridza kuti nyika inotevera kuoneka ichave Korea, inovhara zvibvumirano zvekutengeserana. Apple Music mitengo
Vanoverengeka ndivo maartist avo vakazvipatsanura kubva kune vamwe vese nekuburitswa kwemaalbum avo chete e ...
Imwezve vhiki kunouya kuunganidzwa kwemashoko kwawanga wakamirira. Kana iwe usingakwanise kutiverenga mukati mevhiki kana iwe unoda ...
Omnifone, mutsva wemimhanzi kuwanikwa kweApple
Zvekare, Apple inozviitazve. Ino nguva, anotenga mimhanzi yekushambadzira sevhisi mugore, sechikamu chakakosha chekuvandudza Apple Music yake.
Chibvumirano pakati peApple Music naTravis Scott kuburitsa dambarefu idzva chete
Zvishoma nezvishoma Apple iri kubheja zvakanyanya pane zvirimo muApple Music. Kuburikidza nezvibvumirano zvekushandira pamwe, panguva ino vanotivigira dambarefu idzva remuimbi uyu.
"Simuka", iyo nyowani nyowani kubva kuna Katy Perry chete yeApple Music
Katy Perry chete akapa "Simuka", iyo iconic theme yeRio Olimpiki, yeApple yekuparadzira dijitari chiteshi.
Apple Music inoronga kurova Spotify nekuvandudza mvumo yayo
Iyo Apple kambani yakurudzira akateedzana emadzishe ekuwedzeredza kuti ape maartist zvakanakira pamusoro pevamwe pane-kuyerera mimhanzi masevhisi
Apple Music neNASA vanopemberera kusvika kweiyo Juno space probe kune iyo nyika Jupiter mushure memakore mashanu ekufamba. Tinokuratidza vhidhiyo clip nemumhanzi wacho.
Apple Music neNASA timu kumusoro kuzopemberera kutanga kweiyo Juno mishoni
Apple Music yakabatana neNASA yakaparura chikamu chitsva chekupa ruzivo rwese rwakanangana nerwendo rweJune kuenda kuJupiter
Apple inofarira kutenga Tidal yekusimudzira mimhanzi yayo
Iyo Apple kambani iri kutaurirana kuti ibatanidze iyo Tidal pane-kuyerera mimhanzi chikuva mune yayo Apple Music masevhisi.
Apple inopemberera gore rekutanga reBeats 1 ine vhidhiyo
Apple Music radio station Beats 1 ine gore rimwe chete, sezvakaita Apple Music mumhanzi sevhisi
Chii chakatanga seApple sevhisi nyowani kuti ienzane nemakwikwi maererano nekutenderera ...
Kusarudzika ndeimwe yeshongwe idzo Apple inoda kumisikidza zano rayo mukati meApple Music, kubatsira maartist
Iko shanduko dzakawedzerwa kuTunes mune yekupedzisira gadziriso dzakajekeswa uye kuwanda kwakawanda kwakawedzerwa kune software ...
Nyowani Apple Music bug yakawanikwa muTunes 12.4
Iyo yazvino vhezheni yeTunes 12.4 inopa diki diki kana uchiridza nziyo dzisingasviki 60 masekondi kubva kuApple Music
Apple inogadzirira kuvhura Apple Music muKorea
Apple Music iri kufambisa tebhu nyowani muKorea kuti itange mushando wayo wekushambadzira mumhanzi munyika munguva pfupi
Swedish mumhanzi inoshambadzira kambani Spotify yakangozivisa kuti ine vanopfuura mamirioni zana vashandisi vanoshanda.
Mumwe wevatariri vepamusoro veApple Music, Trent Reznor, anoti kubudirira kweYouTube kuri nekuda kwezviri mukati izvo zvinobira maartist
Kwakasiyana masosi anosimbirira kuti Apple inogona kubvisa kurodha mumhanzi kubva kuTunes
Zvekare zvakare tinogona kurangarira chirevo chinoti "kana rwizi ruchirira, runotakura mvura" parinodzoka ...
Apple Inosunungura Matsva Matsva Nezve Apple Music
WWDC 2016 inosvika uye Apple inoenderera mberi nemuchina wekushambadzira kumusoro uye unomhanya munzira dzese uye iri ...
Matipi gumi ekugona Apple Music (I)
Apple Music, iyo yakaonekwa paWWDC gore rapfuura uye yakaburitswa mukupera kwaJune, yakurudzira mamirioni e ...
Spotify yatanga chirongwa chitsva chemhuri chinotipa 14,99 euros kuwana sevhisi kusvika kunhengo nhanhatu, imwe chete kupfuura Apple Music
Apple inoziva iyo iTunes bug uye inogadzirira iyo yekuvandudza
Apple inobvuma kuti iTunes yanga ichibvisa vamwe vashandisi 'mumaraibhurari emimhanzi uye inotsvaga mutsva mutsva unopa kumwe kuchengeteka.
Kwenguva yakati zvino, zvinoita sekunge Taylor Swift rave rimwe remari dzinowanzo ...
iTunes 12.4 ichatiunzira mabasa matsva eApple Music
Iyo inotevera vhezheni yeTunes, 12.4, ichawedzera mabasa matsva mukuwedzera mukuvandudza mashandiro echishandiso, chimwe chinhu chakanyanya kudiwa nevashandisi.
Kwemazuva maviri isu tanga tichidzidza data nezve zvingangoitika kuvandudzwa kweese Apple Music interface uye yayo ...
Apple Music yakadzikiswa kusvika ku50% yevadzidzi vari munyika nomwe
Apple haina kukanda mapfumo pasi mukuedza kwayo kuwana vashandisi vazhinji vekunyorera kuApple Music uye inoziva chaizvo mhando ...
Apple Music haisati yave pane yedu iDevices kwenguva refu zvakadaro, asi mishumo inoratidza kuti Apple iri kugadzirira kuchichinja nenzira hombe.
Apple Music ichachinja zvishoma mushure meJune WWDC
Ichokwadi ndechekuti iko shanduko kuti kunyangwe chiri chechokwadi hachisi chepamutemo kubvira ...
PaJune 30, sevhisi yemumhanzi yeApple yakatanga, Apple Music, uye kune vazhinji ...
Rokutamba nenziyo kubva kuApple zviziviso zveyakaitika makore makumi mana
Pakupedzisira Kanye West anoburitsa yake yazvino kuroora pane Apple Music Kugamuchirwa!
Kanye West Anoburitsa Zvekupedzisira Imwe Pane Apple Music
Zvinotaridza kuti zvishoma nezvishoma ivo vatangi vakuru veTidal vane zvishoma zvigunwe zvehuma, vatanga kutora maalbum avo ...
Iyo sonos kambani inozivisa mubatanidzwa wayo neApple
Sonos atotamba naApple mumunda wekumhanyisa mimhanzi
Apple Music ine huwandu hwesarudzo dzekutamba uye chimwe chezvinhu zvakagadzirwa naApple…
Spotify inotanga mushandirapamwe wekubvisa vatengi kubva kuApple Music
Spotify inopa Chromecast kuPREMIUM kunyorera kwemwedzi mitatu
Zvishoma nezvishoma Apple Music inoenderera mberi nekuwedzera kwayo kwepasirese. Kana mazuva mashoma apfuura takakuzivisa nezvekuuya kweshumiro ...
Apple inosimudzira Apple Music mu Super Bowl
Apple Music ichangosvika muTurkey nemitengo yakachipa kwazvo kupfuura kuUnited States nekuEurope.
Iyo Apple Music application inovhura mitsva maficha eApple terminals
Chero ani anoti zvimwe zvakashata uye izvo ndezvekuti Apple inoramba ichitora nhanho hombe maererano nemabasa ...
Apple Music browser pasi kwemaawa mashoma
Iyo Apple Music injini yekutsvaga yanga iri pasi kwemaawa mashoma
Musi waNdira 29, Apple ichatanga kufambisa iyo iTunes Radio sevhisi kuApple Music
Mamiriyoni gumi evashandisi veApple Music
Apple Music inosvika mamirioni gumi vanyoreri vashandisi
Zvinoenderana nezvakafanotaurwa, Apple Music inogona kusvika mamirioni makumi maviri evashandisi mukati megore rinotevera.
Catalog yeBeatles inogona kurova Apple Music ino yeKisimusi
Catalog yeboka reBritish maBeatles aigona kusvika Apple Music muna Zvita 24
Zvakare Taylor Swift uye panguva ino chete vhidhiyo yekushanya kwake kweApple Music
Chiteshi chitsva cheStar Wars chiteshi chakatangwa neApple chinongobvumidzwa kune vanyoreri
Chiteshi chitsva cheStar Wars chiteshi chinorambidzwa